War deg deg ah: Ra'isalwasaare Farmaajo oo lagu wargaliyey in uu deg deg isku casilo – SBC
War deg deg ah: Ra'isalwasaare Farmaajo oo lagu wargaliyey in uu deg deg isku casilo
Ra’isalwasaaraha DKMG Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa la sheegay in lagu wargaliyey in uu si deg deg ah isku casilo isla markaana uu dhaqan galiyo heshiiskii Kampala qodobadkii ka soo baxay ee ku aadanaa in uu xilka Ra’isalwasaaraha iska casilo.
Warar SBC ay ka heshay ilo wargal ah oo ku sugan xarunta madaxtooyada ayaa sheegaya in Ra’isalwasaaraha kulan uu la qaatey saraakiil ka socota wadanka Ugandha oo ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasi oo uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada Ugandha Jeneral Aronda Nyakairima ay u sheegeen in ay tahay in uu deg deg isku casilo.
Qof ka tirsan xafiiska Ra’isalwasaare Farmaajo oo codsadey inaan magaciisa saxaafada laga sheegin sababo uu ku macneeyey inaan loo ogoleyn in uu saxaafada war siiyo ayaa u xaqiijiyey SBC in Ra’isalwasaaraha la soo gaarsiiyey waraaq ka socotey madaxweynaha Ugandha Yuweri Museveni taasi oo aan la ogeyn waxa ka qoran, hase yeeshee sarkaalkani ka tirsan xafiiska Ra’isalwasaaraha wuxuuu farta ku fiiqay in Ra’isalwasaare Farmaajo loo soo jeediyey in uu deg deg ugu dhawaaqo iscasilaada, hase yeeshee Ra’isalwasaare Farmaajo ayaa la cadeeyey in uu gabi ahaanba ka soo horjeestey dalabka Jen. Aronda Nyakairima kaasi oo u ekaa mid amar ah, isagoo u sheegay Jeneraalka inaanu xilkan u hayen dawlada Ugandha balse uu hayo shacabka Soomaaliyeed.
Jeneraalka ciidamada Ugandha ayaa ku wargaliyey Ra’isalwasaare Farmaajo inaanay damaanad qaadeyn amaankiisa hadii aanu deg deg isku casilin mudo 48 saac ah, taasi oo keentey in Farmaajo uu u sheegay Taliyaha in amaanka madaxda dawlada KMG ah ay masuul ka yihiin ciidamada AMISOM ayna u siman yihiin, hadii taasi ay socon wadyana uu isagu kalsooni ku qabo ciidamada Soomaaliyeed oo uu sheegay in amaankiisa ay sugi doonaan.
Kulanka Farmaajo & Jeneral Aronda ayaa la xaqiijiyey in uu ku soo dhamaadey isafgaran waa iyadoo lagu kala tagey, waxaana kulankaasi ka horeeyey kulan uu Jeneral Aronda Nyakairima uu saaka la qaatey madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Warar dheeraad ah oo arintan ku aadan kala soco SBC daqiiqad daqiiqad, idinka EEBE.